The Bedside Detective (2007) | MM Movie Store
IMDb Rating (6.5) ရရှိထားတဲ့ ထိုငျးဟာသဇာတျကားလေးဖွဈပါတယျ။ဂြော့ဆိုတဲ့ ငနဲလေးဟာ စှနျ့စားတီထှငျရတာကို ကွိုကျတတျတဲ့ လူငယျတဈယောကျပါ…သူဟာ…တီဗှီပနျကာ…နရေောငျခွညျနဲ့ကငျစားရတဲ့ ဘာဘီကြူးဆိုငျ စတဲ့ စှနျ့ဦးတီထှငျတဲ့လုပျငနျးတှကေို စိတျကူးပေါကျသလိုလုပျပွီးလုပျတိုငျးမှာ သောကျတလှဲဖွဈသှားတတျပမေယျ့
စိတျဓါတျကတော့ လုံးဝမကပြါဘူး….ဒါပမေယျ့ အကွှေးတှေ ဖိစီးလာတဲ့အခါမှာတော့ ပိုကျဆံရမယျ့ စှနျ့စှနျ့စားစား အလုပျတဈခုကို လုပျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ….ဒါကတော့ ကွာကူလီဇာတျလမျးအရှုပျတှကေို ဖျောထုတျရမယျ့ စုံထောကျလုပျငနျးပါ။အဲ့ဇာတျလမျးအရှုပျတှထေဲက ကောငျမလေးတဈယောကျကို မွငျမွငျခငျြးကွှသှေားမိတဲ့အခါမှာတော့….
မောငျဂြော့တဈယောကျ ဘယျလိုတှေ စှနျ့စားမလဲဆိုတာ………။မငျးသားကတော့ I fine thank you,love you …Heard Attack ဇာတျကားတှထေဲက မငျးသား Sunny Suwanmethanont…မငျးသမီးက ခဈြစဖှယျမကျြနှာပေးလေးနဲ့ Pattarasaya Kreuasuwansri…တကယျကောငျးတဲ့ ထိုငျးဟာသဇာတျကားလေးတှကေ Entertainment ဖွဈတာ အသအေခြာမို့ ကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ဇာတျကားတဈကားပါ။
IMDb Rating (6.5) ရရှိထားတဲ့ ထိုင်းဟာသဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဂျော့ဆိုတဲ့ ငနဲလေးဟာ စွန့်စားတီထွင်ရတာကို ကြိုက်တတ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ…သူဟာ…တီဗွီပန်ကာ…နေရောင်ခြည်နဲ့ကင်စားရတဲ့ ဘာဘီကျူးဆိုင် စတဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို စိတ်ကူးပေါက်သလိုလုပ်ပြီးလုပ်တိုင်းမှာ သောက်တလွဲဖြစ်သွားတတ်ပေမယ့်
စိတ်ဓါတ်ကတော့ လုံးဝမကျပါဘူး….ဒါပေမယ့် အကြွေးတွေ ဖိစီးလာတဲ့အခါမှာတော့ ပိုက်ဆံရမယ့် စွန့်စွန့်စားစား အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်….ဒါကတော့ ကြာကူလီဇာတ်လမ်းအရှုပ်တွေကို ဖော်ထုတ်ရမယ့် စုံထောက်လုပ်ငန်းပါ။အဲ့ဇာတ်လမ်းအရှုပ်တွေထဲက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို မြင်မြင်ချင်းကြွေသွားမိတဲ့အခါမှာတော့….
မောင်ဂျော့တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေ စွန့်စားမလဲဆိုတာ………။မင်းသားကတော့ I fine thank you,love you …Heard Attack ဇာတ်ကားတွေထဲက မင်းသား Sunny Suwanmethanont…မင်းသမီးက ချစ်စဖွယ်မျက်နှာပေးလေးနဲ့ Pattarasaya Kreuasuwansri…တကယ်ကောင်းတဲ့ ထိုင်းဟာသဇာတ်ကားလေးတွေက Entertainment ဖြစ်တာ အသေအချာမို့ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။